Mihabetsaka ny tombom-barotra amin'ny hotely eran-tany, tsy any Eropa ihany
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Mihabetsaka ny tombom-barotra amin'ny hotely eran-tany, tsy any Eropa ihany » Page 3
Ny tombom-barotra amin'ny volana dia voarakitra ao amin'ny 2%, teboka 1.9 isan-jato ambony noho ny tamin'ny ora tamin'ny taon-dasa.
Ny Moyen Orient dia nampiseho ny GOPPAR avo indrindra amin'ny faritra manerantany, nanamarina $ 19.75, izay mbola 73% nidina tamin'ny fotoana mitovy tamin'ny taona lasa ary ny ambany indrindra ho an'ny tarehimarika hatramin'ny Novambra.
Ankoatra ny tombom-barotra, ny laharana ambony dia manohy manao tsara mandinika ny toe-javatra manerantany. Ny fibodoana dia nijanona mihoatra ny 40% ho an'ny volana fahefatra nifanesy, nihena 29.8 isa isan-jato tamin'ny taona teo aloha. Ny RevPAR dia nilatsaka isam-bolana tamin'ny $ 59.72, fihenan'ny 15% tamin'ny Janoary.
Na dia mbola mihena aza ny vidin'ny asa, dia nitombo isam-bolana izy ireo, ary nahatratra $ 39.40 ny avo indrindra tamin'ny volana febroary, 11 $ ambony noho ny volana aprily, raha ny faritra Afovoany Atsinanana voalohany no nahita fa nihena be ny asany. Ny vidin'ny overhead dia nisondrotra ihany koa tamin'ny avo indrindra hatramin'ny volana aprily.
Ny tombom-barotra amin'ny volana dia voarakitra amin'ny 19.5%.
Page 3 ny 3 Prev Manaraka